जुआन डेल भालका पुस्तकहरू, कसरी अनुभवहरूले राम्रो कामहरू गर्दछन् वर्तमान साहित्य
"जुआन डेल भाल किताबहरू" को बारेमा वेबमा सोधपुछ गर्दा सबैभन्दा सामान्य सन्दर्भहरू प्राप्त हुन्छन् जुन उनको पुस्तकको बारेमा हुन् क्यांडेला (२०१ 2019) यो उपन्यास लेखकले एक्लै प्रकाशित गरेको दोस्रो कार्य हो, जुन उनलाई उसी वर्ष प्राइमेभरा पुरस्कार प्राप्त भयो। जुआन डेल भाल आफ्नै अनुभवहरू प्रयोग गरेर वास्तविक कथाहरू लेख्ने पक्षमा उभिन्छन्, जसलाई उनले आफ्नो साक्षात्कारमा व्यक्त गरेका थिए जेन्डा: "मलाई मात्र थाहा छ के लेख्ने मलाई थाहा छ ..."।
लेखक मुख्य रूपमा टेलिभिजन संसारमा बाहिर उभिए, जहाँ उनले एक निर्देशक, पटकथा लेखक, प्रस्तुतकर्ता र निर्माता को रूप मा अनुभव छ, दुबै रेडियो र टिभी। आफ्नो क्यारियर भर मा, लेखक हास्य को एक चिनारीएको भाव देखाएको छ। केहि चाखलाग्दो कुरा के हो भने उसले केहि सामाजिक नेटवर्कहरु लाई आफ्नो घृणा व्यक्त गरेको छ, र एक "AntiInstagram" को रूप मा वर्गीकृत भयो। २०११ देखि उनी लोकप्रिय कार्यक्रममा भाग लिएको लागि मान्यता प्राप्त छन् एन्थिल de एन्टेना।।
1 जुआन डेल वैलको जीवनको संक्षिप्त सारांश
2 जुआन डेल वैलका किताबहरू
2.1 यो झूट देखिन्छ (२०१))
2.2 क्यांडेला (२०१ 2019)
2.3 डेलपाराइसो (२०२१)
जुआन डेल वैलको जीवनको संक्षिप्त सारांश
जुआन डेल भाल पेरेज म्याड्रिडमा सोमबार, अक्टोबर 5, १ Mad .० मा जन्मेका थिए। उनको युवावस्थामा उनी चिढचिढाहट र अत्यन्त विद्रोही भएको चरित्रका थिए। यस व्यवहारले उसको उच्च विद्यालयको पढाइमा असर पार्‍यो, त्यस कारणको लागि दुई पटक बाहिर निकालियो। उनका पहिलो काम निर्माणकर्मीका रूपमा थिए र पछि उनले बिस्तारै पत्रकारितामा छाडे। सन् १ 1992 XNUMX २ मा उनले यस अन्तिम पेशामा अभ्यास गर्न थाले स्पेनको राष्ट्रीय रेडियो र केहि समयका लागि उहाँ एक प्रसिद्ध बुलफाइटि chronic क्रोनर पनि हुनुभयो।
जुआन डेल वैलको बिहे अक्टोबर,, २००० को प्रसिद्ध लेखक र प्रस्तुतकर्ता नुरिया रोकासँग भयो। यो संघको परिणाम स्वरूप, children बच्चाहरु परिणाम: जुआन, पाउ र Oaclivia।
२० बर्ष सफल क्यारियरको साथ, उनले महत्वपूर्ण स्पेनिश मिडिया मार्फत यात्रा गरेका छन्: एन्टेना।, TVE, नहर9y Telecinco। बराबरी, २०१ 2014 मा उनले लगातार years बर्ष रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुत गरे तपाईंलाई हुन सक्ने उत्तम कुरा, आफ्नो श्रीमती संग। पछिल्लो दशकमा उनले यसका लागि काम गरेका छन कुरा देखाउनु एन्थिल, एक पटकथा लेखक, लेखक र कुराकानी होस्टको रूपमा.
जुआन डेल भालले साहित्यिक संसारमा दुई पुस्तकका साथ सुरू गर्नुभयो जुन उनले आफ्नी पत्नीसँगै लेखेका थिए: आना को लागी, तपाइँको मृत को (2011) र प्रेमको अपरिहार्यता (2012)। २०१ 2017 सम्म उनले आफ्नो पहिलो एकल उपन्यास प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेनन्: यो झूट जस्तो देखिन्छ, तपाईको व्यक्तिगत अनुभवमा आधारित। यो काम, एक धेरै छोटो समय मा, सबै भन्दा बेच्ने पुस्तकहरु मा हुन व्यवस्थित।
आफ्नो पहिलो एकल कार्यको राम्रो स्वीकृति पछि, लेखक आत्मविश्वासमा बढ्यो र उसले आफूले माया गरेको कुरा गरिरह्यो: लेखन। दुई वर्ष पछि उसले आफ्नो दोस्रो उपन्यास प्रकाशित गर्ने निर्णय गरे, क्यांडेला (2019)। यो पहिलो व्यक्तिमा बताइएको कहानी हो र जसको नायक एक असाधारण महिला हो जसको जीवन आत्म-सुधारको उदाहरण हो।
जुआन डेल भेल यस कथाको साथमा प्राइमभेरा डे नोभेला २०१ prize पुरस्कार जित्न खुशी थिए, स्पेनी साहित्यको महान् मान्यता प्राप्त भएको पुरस्कार। यो २०२१, लेखकले पुस्तक सुरू गर्ने घोषणा गरे Delparaíso, एउटा उपन्यास जसले म्याड्रिडमा विचित्र शहरीकरणको ढोका खोल्छ धेरै रहस्यहरूमा समाहित गर्दछ।
जुआन डेल भालको एक साहित्यिक लेखकको रूपमा क्यारियर छोटो भएको छ, यद्यपि लेखकले राम्रो कथाहरू प्रदान गरेका छन् जुन पार भइसकेका छन्। अब, आफ्नो कार्यहरु मा एक सानो नाश्ता प्रस्तुत छ।
यो झूट जस्तो देखिन्छ (2017)
यस समसामयिक उपन्यासमा लेखकले पहिलो व्यक्तिको आफ्नै कथा सुनाउँछन्, यसका लागि छोटो तर राम्रोसँग विकसित अध्यायहरू प्रयोग गरेर। कथा एक ताजा र असुरक्षित कहानी को माध्यम बाट, आफ्नो जीवन को यात्रा र विकास मा केन्द्रित छ। काल्पनिक चरित्र प्रस्तुत भएता पनि लेखकले धेरै परिस्थितिहरूको प्रामाणिक र हल्का वर्णन गर्छ र केही अंशहरूलाई स्फूर्ति प्रदान गरेर राम्रो हास्य प्रदान गर्दछ।
यो झूट जस्तो देखिन्छ क्लाउडियोको कथा हो, एक नम्र, अनाज्ञाकारी र विद्रोही युवा। पुस्तकको प्रत्येक भागमा नायकको जीवनको प्रतिबिम्ब छ, खुला र साहस संग, राम्रो क्षणहरू र अरु धेरै देखाउँदै। आत्म प्रतिबिम्ब को निरन्तर उपयोग धेरै जोड दिइएको छ। यस व्यवसायलाई औपचारिक अध्ययन नगरेको बावजुद लेखकले सफल क्यारियर नबनाएसम्म उहाँ कसरी बिस्तारै पत्रकारितामा प्रवेश गर्नुभयो भन्ने बारेमा कुरा गर्न लेखक यस श्रोतको प्रयोग गर्छन्।
क्लाउडियोले वर्णन गरे कि उनको किशोरावस्था कत्तिको समस्याग्रस्त थियो र यसले कसरी आफ्ना बाबुआमाको लागि जीवन कष्टमय बनायो, मनोवैज्ञानिक केन्द्रमा सीमित हुनुपर्दछ। अन्य विवरणहरू मध्ये, यसले महिलाहरूको महत्त्वको वर्णन गर्दछ जुन उनको जीवनबाट बित्दछन् र उनीहरूले छोडेका शिक्षाहरू। सामान्यतया भन्ने हो भने यो एकदम इमान्दार आत्मकथा हो जसमा लेखकले धेरै रोचक घटनाहरू प्रकट गर्दछन्।
यो झूट देखिन्छ (उपन्यास)
यो जुआन डेल भाल द्वारा प्रकाशित दोस्रो उपन्यास हो, र यसले उनलाई प्राइमेवेर डे नोभला २०१ 2019 अवार्ड प्रदान गर्‍यो। यो पहिलो व्यक्तिको कथा हो को बारेमा कुरा गर्नुहोस् महिला र उनीहरूका अनुभवहरू। लेखकले सही अनुभवहरू प्रतिबिम्बित गर्न खोजेका थिए, मिथ्याभन्दा पर। यो रोजा विलाकास्टनको लागि एक अन्तर्वार्तामा अभिव्यक्त भएको थियो, जसमा उनले भनिन् कि उनले यो चरित्र दुरुपयोगको शिकार भएका एक साथीको वास्तविकतामा आधारित निर्माण गरेकी छिन्।
Candela कुनै लोकप्रिय महिला जस्तो छ कि हामी लोकप्रिय छिमेकमा पाउन सक्छौं एक महिला हो। विशिष्टता जसले यसलाई भिन्नता गर्दछ यसको स्पार्क र यसको प्रतिभा वासियसिट्युडहरूको सामना गर्नुपर्दछ। अब उनी आफ्नो चौथो दशकमा पुगेका छन्, र उनको जीवनलाई दुर्भाग्यले चिह्न लगाएको छ, जुन आपतकाल हो जुन उनको परिवारले प्राचीन कालदेखि अनुसरण गरिरहेकी छ।
उनी स्थानीय बुहारीमा वेटर्रेसको रूपमा काम गर्छिन्, जुन उनी अन्य दुई महिलाको साथ चलाउँछिन् - उनकी हजुरआमा र उनकी आमा (एक आँखा) -। ती तीन महिलाहरूलाई गाह्रो समय आएको छ, तर उनीहरूको हास्य, अम्लीय अम्लीयले गर्दा दिनदिनै सामना गर्न उनीहरूलाई मद्दत गर्दछ।
अवरोध, खतराहरू र पश्चातापहरू पार गर्दै, क्यान्डेला अगाडि बढ्न बाध्य हुनेछ र राम्रो जीवनको खोजीमा उनलाई उत्तम दिन दिन्छन्। अहिलेको वास्तविकताका लागि एकदम उपयुक्त कथा र यसले गहिरो रूपमा प्रतिबिम्बित गर्दछ।
क्यांडेला: प्राइमवेरा अवार्ड ...
लेखकले प्रस्तुत गरेको यो पछिल्लो किस्त यसको विषयवस्तुमा उठेका मुद्दाहरूको कारण हलचल पैदा भएको छ। यो धेरै मुख्य पात्रहरूको साथ एक उपन्यास हो र यसको सीमामा विलासी शहरीकरणमा सेट गरिएको छ मैड्रिड। जुआन डेल वैल कार्यक्रमहरू एक सम्मोहक कथा जुन बिस्तारै स्प्यानिश जेट सेटको अन्धकार पक्ष प्रकट गर्दछ, त्यो संसार जुन धेरैले गर्न चाहन्छ र अनुभव गर्न चाहन्छ.
उपन्यास डेलपाराइसो म्याड्रिडमा विलासितापूर्ण परिसरको बासिन्दाहरूलाई देखाउँदछ, जहाँ विभिन्न परिवार बसोबास गर्छन्, धनीबाट उनीहरूका कर्मचारीहरू। प्रत्येक चरित्र धेरै रहस्य, उदासीन र गैर कन्फर्मिटिहरूको साथ, आफ्नै कथाको नायक हो। यस रेखा बीच परिवार समस्या को एक विशाल संख्या को प्रकट, असुविधाहरु हो कि कुनै लक्जरी लुक्न सक्दैन।
यो एक अत्यधिक संरक्षित साइट हो जहाँ यो बाह्य विश्वसँग कुनै पनि सम्पर्कलाई वेवास्ता गर्न को उद्देश्य हो र जहाँ सबै चीज "उत्तम" देखिन्छ। लेखकले यस समूहका बासिन्दाहरूको दृष्टिलाई मात्र प्रकाश पार्दैन, तर बाहिरबाट हेर्नेहरूको दृष्टिकोण पनि प्रकट गर्दछ, जो अनावश्यकबाट सतहमा परेका छन् - उनी भन्छन् कि भित्रको सबै चीज "स्वर्ग" हो। यद्यपि, प्रवेश गरे पछि, होसियार नभएकाहरूलाई धेरै नै सामान्य र सामान्य वास्तविकताका साथ सामना गर्नुपर्दछ: यस्तो देखिन्छ केहि पनि त्यस्तो छैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » नोभेला » जुआन डेल वैलका किताबहरू